1 ukuthandana app
Ezona ndawo zithandwayo zokubonelela zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo nangasese, phakathi kwezinye izinto. Eli nqaku lijolise ekubekeni eyona ndawo ingcono yokuthandana kwimeko nganye kunye neenjongo zobudlelwane zomntu ngamnye.
Eyona ilungileyo kulwalamano olunzulu- Eharmony
Eyona ilungele ukusebenza ziingcali- EliteSingles
Indawo egqibeleleyo yokuthandana simahla- yiOkcupid
Eyona ndawo yokuthandana uqhelekileyo-AdultFriendFinder
Olona hlelo lukhulu lokuthandana- iTinder
Eyona ndawo iphambili yokuthandana kwabantu abadala- iSilverSingles
Eyona nkqubo ifanelekileyo yobuntu - ihenjisi
Eyona ilungileyo kuma-christian singles - ChristianMingle
Indawo efanelekileyo yokutshata- AshleyMadison
Olona hlelo lokusebenza luhle lokuthandana kwabafazi- iBumble
Abafazi abaninzi kunamadoda- Ukufuna
Indawo yokuthandana enomdla engaphantsi kweminyaka engama-30- Zoosk
Ncomo umsebenzisi - kuba kwisiza ngasinye ukuthandana sibheke ncomo app ivenkile, iingxoxo forum, kunye nohlaziyo trustpilot ukufumana sites kunye mlinganiselo uphezulu avareji ehlelo elinikiweyo.
Ubumfihlo nokhuseleko- Wonke umntu uvile amabali ayoyikisayo emihla ekwi-Intanethi emuncu okanye eyingozi. Ezona ndawo zintle zokuthandana zinempawu zobumfihlo ezakhelwe-ngaphakathi kunye neemodareyitha zokungena xa umsebenzisi engekho emgceni okanye ebeka umngcipheko kwabanye.
Iimpawu ezizodwa- Ezinye iiwebhsayithi zokuthandana zinika nje iindlela zokudibana ngqo, nokuba kungokuxoxa okanye ukufowuna ngevidiyo. Abanye banceda abantu bafumane umdlalo wabo kunye nemidlalo yokuhambelana, ukhetho lokucoca, kunye nokunye. Ezi zinto zongezelelweyo zibonisa ithuba elingcono kwimpumelelo.
1. I- Eharmony- Eyona ilungileyo kulwalamano olunzulu
Izigidi zezibini zidityaniswe ngu-Eharmony-enyanisweni, abasebenzisi be-400 + batshata nomntu abadibana naye kwiwebhusayithi yonke imihla. Iqonga liphumelele amabhaso njengeyona ndawo ibalaseleyo yokufumana ubudlelwane obuzinzileyo.
I-Eharmony ifuna ukuba abasebenzisi bagqibe kuvavanyo olude ekubhaleni, olusebenza njenge "inkqubo yokuhambelana ehambelanayo." Indawo ke isebenzisa olu lwazi ukubonisa abasebenzisi ukuba banokuphumelela ekukhetheni ukuthandana.
2. Ii-Singles ze-Elite- Ezona zilungileyo kubasebenzi abaqeqeshiweyo
Ubulungu be-Elite Singles bufaneleke kakhulu, busenza ukuba sikhethe ngokugqwesileyo ukuba abasebenzisi bafuna incoko evuselelayo. Phantse iipesenti ezingama-85 zabathathi-nxaxheba banesidanga semfundo ephezulu, kwaye iipesenti ezingama-90 zingaphezulu kweminyaka engama-30. Ezi zibalo ziqinisa amava obomi kwi-equation dating.
Indawo itshatisa abasebenzisi nezinye ii-singles zisebenzisa ialgorithm ejolise kwiimpendulo zabo kwiphepha lemibuzo. Abantu bayisebenzisa ikakhulu ekufuneni ubuhlakani bexesha elide, ngaphakathi nakwamanye amazwe. Okwangoku iyasebenza kumazwe angama-25.
Le ndawo ayenzelwanga nabani na ofuna ubudlelwane bexesha elide. Inika iindlela ezimbini eziphambili: ukudlala ngothando (kwi-app) okanye ukuhlangana. Yiyo leyo, kwaye kwabanye abantu, yile nto kanye abayifunayo.
Ukubhalisa ngale app kulula. Ngokungafaniyo nezinye iisayithi zokuthandana ezifuna iphepha lemibuzo, i-AFF iyigcina kwinkqubo yokubhalisa yesibini-yesibini. Abasebenzisi bangaqala ukukhangela kwangoko.
4. ISilverSingles- Eyona ilungele abantu abangatshatanga ngaphezulu kweminyaka engama-50
5. Bumble - Olukhulu ukhetho lwabafazi
Ukuqhaqhazela akuqhelekanga phakathi kwezicelo zokuthandana kuba kunika amandla abantu basetyhini ukuba baqalise unxibelelwano. Amadoda awakwazi ukunxibelelana nemidlalo yabo yabasetyhini ngaphandle kokuba owasetyhini uqhagamshelana naye kuqala. Oku kuvumela amanenekazi ukuba akhokele kube kanye.
Iqonga ligxile kunxibelelwano kwangoko. Abasebenzisi baneeyure ezingama-24 zonxibelelana, kwaye emva koko, umdlalo uphelelwa. Oku kubonisa ukuba indawo ilungiselelwe ii-hookups ezizenzekelayo, kodwa ikwafanelekile kwabo bangathandi ukuchitha ixesha elininzi bekhangela.
Insiza idibanisa ngaphandle komthungo namaqonga onxibelelwano anje nge-Facebook, Spotify, kunye ne-Instagram, ivumela abasebenzisi ukuba babonise imiba eyahlukeneyo yobuntu babo. Iiakhawunti zikwangqinisisiwe ukunceda ukunqanda iinkangeleko ezingezizo ezivela ekuveleni rhoqo.
6. Ihenjisi - ukujola Innovative app
Inkampani iphinde yavula i-Hinge ngo-2016, kwaye yenye yezona zinto zixoxwa kakhulu ngokuthandana kwiminyaka yakutshanje, ikakhulu ngenxa yamazinga okuphumelela kwabasebenzisi bayo. Phantse iipesenti ezingama-75 zabasebenzisi beHinge bakhetha ukuya kumhla wesibini emva kokudibana nemidlalo yabo.
Iqonga likaHinge linomdla kuba likhuthaza abasebenzisi ukuba bathande okanye banike izimvo kwicandelo elithile lomnye umntu. Inika indlela yokuba abantu banxibelelane ngaphaya kwengxoxo yesiqhelo.
8. Ukufuna- Kwiishukela ezineswekile kunye neentsana zeswekile
Ukufuna kwahlukile kuba kugxile ekudibaniseni abantu abancinci (iswekile iintsana) nabantu abadala, abazizityebi zeswekile. Kuyabonakala ukuba, ixhaphake kakhulu kunokuba ininzi ikholelwayo, inikwe iqonga ngoku elinababhalisi abangaphezulu kwesigidi se-10. Umntu ngamnye unokuchaza imigaqo yakhe ngaphambi kokuba aqhagamshele, nokuba bafuna ukuhamba, bafuna isibonelelo, okanye ezinye iinkcukacha.
9. JDate - singles zamaJuda kuphela
I-JDate yinkonzo yokubonana ngokukodwa yabangamaJuda abangatshatanga. Yasekwa ngo-1997 kwaye ngoku iyafikeleleka kumazwe angaphezu kwe-100, ivumela abasebenzisi ukuba banxibelelane nabantu abangatshatanga abangamaYuda ngeelwimi ezintlanu ezahlukeneyo (isiNgesi, isiHebhere, isiFrentshi, isiJamani, neSpanish)
Abasebenzisi banokunxibelelana nabani na onobulungu basimahla okanye obuhlawulelweyo. Inkonzo yabathengi itshekisha iprofayile nganye ukuqinisekisa ukuba iyenziwa ngabathengi bokwenyani.
10. ChristianMingle - Best Christian ukuthandana isayithi
UChristianMingle unceda abasebenzisi ngaphakathi koluntu lwamakristu ngokufumana uthando lwabo lwanaphakade. Iqhayisa ngaphezulu kwesigidi sabasebenzisi, kwaye indawo ikhuthaza ngokucacileyo "ukuthandana okusekwe kwinkolo" kwithuba elide elinokubakho.
Kukho ukhetho lweakhawunti yasimahla okanye ubulungu benyanga be- $ 29.95. Le yokugqibela iza nesiqinisekiso, apho umsebenzisi anokufumana iinyanga ezintandathu simahla emva kokuba ubulungu beenyanga ezintandathu buphelile ukuba abafumani nto ifanelekileyo.
11. Zoosk - Uluntu olukhulu lwamanye amazwe
IZoosk inelona qonga likhulu kwinqanaba lehlabathi, elinamalungu angaphezu kwezigidi ezingama-40 kwihlabathi liphela. Suku ngalunye, aba basebenzisi bangenisa ngaphezulu kwesigidi semiyalezo kwiilwimi ezingama-25 ezahlukeneyo. IZoosk isebenza kumazwe angaphezu kwama-80.
12. I- Reddit R4R- Eyona ilungele abasebenzisi beReddit
I-R4R, okanye i-Redditor ye-Redditor, i-subreddit enikezelwe kubasebenzisi abaxhumayo. Iqonga alisebenzisi iskimu sokudibanisa, endaweni yoko, yindawo enkulu yentengiso zobuqu.
Iikhrayitheriya zomsebenzisi zokukhangela zivelisa iziphumo abazikhethileyo. Abasebenzisi beReddit bayisebenzisela ukufumana imisebenzi, izihlobo, amaqela, ii-hookups, kunye nobudlelwane bexesha elide.
Nangona iforum ngokubanzi, kusekho imigaqo enxulumene nobudala, ukuba bucala, ukuba semthethweni nokuziphatha. Umzekelo, iiposti ze-NSFW zivumelekile kodwa mazibhalwe enjalo ukuze abasebenzisi bakwazi ukuthatha isigqibo sokuba bafuna ukujonga iposti okanye hayi.
13. OkCupid - Simahla kwaye iyathandwa
I-OkCupid yenye yezona ndawo zaziwayo zokuthandana kunye neempawu ezigcweleyo ezinokuthi zisonjululwe ngamanye amalungu ngaphambi kokudibanisa. Iyafumaneka kuzo zombini i-desktop kunye nohlobo lweselfowuni, eneenkcukacha ezininzi ezinokuthi zizaliswe ngabasebenzisi ngezona ziphumo zihle.
14. Ashley Madison - Best utshatile ukuthandana isayithi
UAshley Madison lolunye uhlobo, lwenzelwe abantu abatshatileyo abafuna ukuba nemicimbi yabucala. Ayinxibelelananga neeakhawunti zemidiya yoluntu kwesi sizathu.
Kukho ezinye izithintelo zabucala kunye neempawu zokunceda abasebenzisi ukuba bahlale bengaziwa ukuba bayoyika ukubanjwa. Ukongeza, u-Ashley Madison unokhetho lokuhamba apho amalungu anokukhangela indawo azayo kwangaphambili.
I-Match.com - Umdlalo ubekhona ukusukela ngo-1995 kwaye unikezela ngenkqubo yokucebisa yokubonisana ukunceda abathathi-nxaxheba kwimidlalo yokutshatisa kunye nemibono yokuthandana.
Tinder -Le app yokuthandana ithandwa ngokubanzi kwaye iza ngokuthembeka. Uninzi lwabantu luyisebenzisela ii-hookups, zinikezwe isiseko somsebenzisi esikhulu kunye ne-algorithms eqhutywa yindawo.
I-BlackPeopleMeet- Ngaphezulu kweminyaka eli-18, iBlackPeopleMeet ibidibanisa ii-singles zase-Afrika zaseMelika zifuna uthando. Amalungu esiza ayi-100,000 + angadlala ngothando, nge-imeyile, kwaye abone ukuba ngubani ojonga iiprofayili zabo.
I-Grindr-I- Grindr yenzelwe kuphela abantu be-LGBTQA +. Isekwe kwindawo, kwaye abasebenzisi ngokuyintloko bayisebenzisela ukukhonkxa, nangona umdlalo wexesha elide kunokwenzeka.
Intabalala yeentlanzi -Le webhusayithi yokuthandana isekwe eCanada, kodwa ivumela abasebenzisi ukuba banxibelelane nabantu abavela kwihlabathi liphela.
Iindawo zokubonana zivelisa abantu echibini elikhulu kakhulu labantu kunokuba umntu omnye abe nethuba lokudibana ebomini bokwenyani. Oku kunjalo ngakumbi kubasebenzisi abanamaqela entlalontle, abatsha edolophini, okanye ngenye indlela.
Ngokubanzi, ewe, ukuthandana zokusebenza zikhuselekile, kodwa kusafuna ukuqonda kunye nononophelo. Iiapps zinempawu zabucala endaweni yokunceda amalungu aphume, njengokuqinisekiswa kweprofayili. Ezinye iiwebhusayithi zikwaskena abathathi-nxaxheba ngesandla, zongeza ukhuseleko olongezelelweyo kwinkqubo.
Abantu akufuneki babonelele ngolwazi lomntu siqu ngaphambi kokudibana nomntu ebomini bokwenyani, njengegama labo, idilesi, okanye kwanommelwane wabo. Kukwalumkile ukucwangcisa umhla wokuqala kwindawo kawonkewonke. Ukuqhagamshelana nomhlobo kwangaphambili kwaye ubazise ukuba baya kuthandana nomntu ongamaziyo ayisiyonto imbi leyo.
Ungaze unikezele ngolwazi lomntu siqu kwi-intanethi, ngakumbi ngaphambi kokudibana ngobuqu. Olu lwazi lubandakanya ifani, umqeshi, idilesi, kunye nendawo yokuhlala.
Xa udibana naye nabani na kwi-Intanethi, cwangcisa imihla yokuqala ukuba yenzeke kwiindawo zikawonke-wonke. Le isenokuba yindawo yokutyela, ihotele, iholo yemidlalo yeqonga, okanye enye indawo kawonke-wonke. Ziphephe iindawo ezikwanti ezinjengeelwandle, kwaye ungaze uvumele abantu ongabaziyo bangene endlwini.
Okokugqibela, nxibelelana nomhlobo ngaphambi komhla ukuze ubazise malunga nexesha kunye nexesha lokubuya elilindelweyo. Bazise xa ilixesha lokuba uye ekhaya. Ukubonelela ngolongezelelo lokhuselo, cela ukuba babize okanye babhalele ngalo mhla ukuqinisekisa ukhuseleko oluphezulu.
Ukwenza amadinga okokuqala kunokuba nzima! Ukuqinisekisa ukhuseleko ngokugqibeleleyo kunye nokudibana nomdlalo ngobuqu, landela ezi ngcebiso:
Gcina ingqondo evulekile. Abantu banokubonakala bahluke kakhulu emntwini kunokuba besenza kwi-Intanethi, ke zilungiselele ukuba utshintsho olukhethiweyo lutshintshe.
Kuphephe ukuba sesikweni kakhulu. Ukuseka intlanganiso yentlalontle, njengomhla wesidlo sasemini, kuvumela abasebenzisi ukuba bazane ngaphandle kokuziva benyanzelekile ukuba bachithe iiyure kunye.
Ukuphonononga iincoko ngaphambi kokuya kumhla Phinda ufunde iprofayili yomntu kwaye uphonononge okwakuxoxiwe, kunye nokucwangcisa izihloko zengxoxo ngokubanzi.
Ewe kunokwenzeka! Ukuba abantu ababini badibana, bayahambelana, kwaye ikhemistri ikhona, ubudlelwane bunokujika bube yinto ezinzileyo nekhuselekileyo. Kwenzeka yonke imihla, enkosi kwiindawo ezinje nge-Eharmony.
Icebo ukuthandana online kukuba umntu ukwazi oko bafuna kwaye kufuneka kubudlelwane kwangaphambili. Ngokusekwe kuluhlu olungentla, zininzi iindlela zonxibelelwano ezifumaneka kwezi ndawo.
Gcina isilumkiso kodwa ingqondo evulekileyo xa usebenzisa indawo yokuthandana. Indawo nganye apha inento yokubonelela, kuxhomekeke kwinto enqwenelwa ngumsebenzisi.
Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyifunayo: Olu lwazi alunalo ingcebiso okanye isithembiso sokuthenga. Naluphi na ukuthengwa okwenziwe kule ntetho ingasentla kwenzelwa umngcipheko wakho. Qhagamshelana nomcebisi oyingcali okanye oqeqeshiweyo ngaphambi kokuthenga. Naluphi na ukuthengwa okwenziwe kule khonkco kuxhomekeke kwimigqaliselo yokugqibela kunye neemeko zentengiso yewebhusayithi ekhankanywe kumthombo. Umshicileli womxholo kunye namaqabane akhe okusasaza asezantsi awathathi xanduva ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo. Ukuba unazo naziphi na izikhalazo okanye imicimbi yelungelo lokushicilela enxulumene nelinqaku, nceda unxibelelane nenkampani malunga nezi ndaba. Unxibelelwano oluqulethwe kolu hlaziyo lwemveliso lunokubangela ikhomishini encinci kumbhali ukuba ukhetha ukuthenga imveliso ekucetyiswa ngaphandle kwendleko ezongezelelweyo kuwe.
I-15 yeyona Ndawo yokuPhila ngokuPhambili kwiNkqubo yokuFumana ubudlelwane
Ngaba unethemba lokuntywila iinyawo zakho kwilizwe lokuthandana emva kwexesha elide lokuziqhelanisa nentlalo? Ukuba ukudibanisa neqabane elitsha elinokubakho kwi "phambi kwamaxesha" kwakunzima-ukongeza ubhubhane wehlabathi kumxube ukwenzile kwalukhuni ngakumbi ukufumana loo ntlantsi okanye unxibelelwano. Ngeli xesha lokuqheleka, ukudlala ngothando kunye neparam ezinokubakho ngaphezulu kwenkqubo yokuthandana kwi-Intanethi kunokuba yeyona ndlela ilungileyo yokwazi umntu.
Kodwa inyani kukuba, ukuthandana kwi-Intanethi kunokuziva kunzima. Ayisiyonto yokwenza izigqibo ngokusekwe kwiifoto ezimbalwa kunye nomgca omnye webhayos, okanye ukungathandeki kokuthumela imiyalezo ethe ngqo (okanye ii-DMs) kubantu ongabaziyo ukuba babe nomoya. Inani elikhulu leeapps kunye nabasebenzisi banokwenza ukuswayipha ngokulula kubonakale kungumsebenzi otyhafisayo.
Enyanisweni, abaphulaphuli dating online kulindeleke ukuba ikhule kubasebenzisi million 37,5 ngo 2023, ngokutsho data evela Statista. Kwaye ngo-2040, i-eHarmony iqikelela ukuba iipesenti ezingama-70 zezibini ziya kuba sele ziqalisile ubudlelwane bazo kwi-intanethi. Kuyenzeka ukwenza ukuba umhlaba wokuthandana uzive ulawulwa, nangona kunjalo-kuya kufuneka ufumane usetyenziso oluchanekileyo. Umzekelo, kukho amaqonga e-niche ngokukodwa abo bathanda ukulima , ibhekoni , okanye ukubetha iindevu (ewe, kakhulu).
Ke ukuba ujonge ukwenza unxibelelwano olubanzi kunye, yithi, umntu ongaphezulu kweminyaka engama-50, osandul 'ukuthandana emva koqhawulo-mtshato, ngethemba lomhla wevidiyo, okanye ufuna ubudlelwane, eziapps zokwenza amadinga kwi-Intanethi (ezinye, nokuba zisimahla) zigubungela zonke iziseko.
Umdlalo yeyona app idumileyo yokuthandana kwi-intanethi kumazwe ali-17 ngokophando lwePCMag lwabantu abangama-2 000. Njengenye yeenkonzo zokuthandana ze-OG (isuswe kwiwebhusayithi kuphela kwiwebhusayithi nakwiapp), Umdlalo unesibheno esithile kwabo baphakathi kweminyaka engama-45 nama-65 befuna ulwalamano olunzulu; uphando olongezelelekileyo olwenziwe nguSurveyMonkey lufumanise ukuba iipesenti ezingama-58 zabantu abadala abaneminyaka engama-45-54 ubudala zisebenzisa iMatch, ngaphezulu kwesibini sepesenti abasebenzisa iTinder. Ungayikhuphela simahla, nangona oko kuya kukuthintela ekukhangeleni; ukuba ufuna ukuthumela umyalezo kumaqabane anokubakho, imirhumo iqala kwi- $ 21.99 ngenyanga.
2. Ixesha lethu
Ukuthandana zokusebenza nje millenials Iipesenti ezingama-20 zabasebenzisi be-intanethi abaphakathi kweminyaka engama-55 ukuya kuma-64 basebenzise i-app yokuthandana okanye inkonzo, ngokokuvota okuvela kubuchwephesha nakwinkampani yophando iMorning Consult. Ixesha lethu liguqula umbono wenkcubeko yokuhlangana entloko; Endaweni yoko, ikhuthaza abasebenzisi ukuba bafune ipen pals, izihlobo, imihla, ubudlelwane bexesha elide kunye namaqabane omtshato. Uhlelo lokusebenza lokukhuphela simahla likuvumela ukuba uthumele ii-imeyile, udlale ngothando, kwaye utshatise namaqabane anokubakho, kunye nokubhaliselwa kwepremiyamu ($ 38 ngenyanga) kuvumela amanqaku ongezelelweyo njengokukwazi ukubona ukuba ngubani othande iprofayile yakho.
IBumble iyazibeka ngokwahlukileyo kuzo zonke ezinye iinkonzo zokuthandana ezixinanisa ivenkile yohlelo lokusebenza ngokufuna abasetyhini ukuba benze inyathelo lokuqala kwakwenziwa umdlalo. Ukwafumana kuphela iiyure ezingama-24 zokuthumela umyalezo, ngaphandle kokuba utyala imali kubulungu boKuqinisa, oqala kwi- $ 10.99 ngeveki. Abasetyhini bayayithanda iapp kuba iyancipha kwinani lemiyalezo engacelwanga, kwaye amadoda ayayithanda-eneneni, iipesenti ezingama-58 zabaphenduli abakhethe iBumble kuphando luka-PCMag yayingabafana-kuba ithatha uxinzelelo ekuqaliseni. Kwaye, wakube ufumene umntu onomdla kuye, unokukhetha ukuya kumhla wevidiyo kwi-app.
Ingqokelela inokuba izise "inkcubeko yokuhlangana," kodwa iseyeyona ndawo iphambili yokuthandana kwii-US Inabasebenzisi abamalunga nezigidi ezisi-8, uninzi lwayo nayiphi na enye inkqubo yokuthandana evavanywe nguStatista . Oko kuthetha ukuba unethuba elihle eliqinisekileyo lokuba ekugqibeleni udibane nomntu owenza umdla wakho-nokuba kuthabatha ixesha elininzi lokuswayipha ukuya apho. Uhlelo lokusebenza lusimahla, kodwa ungafikelela kwiimpawu zepremiyamu ezinje ngeTinder Plus eqala nge- $ 9.99 ngenyanga.
5. Intlanzi eninzi
Enye yeendawo zokuqala zokuthandana kwiiwebhusayithi ezitshintshileyo ezineliso ekufumaneni ubudlelwane, i-POF yayinabasebenzisi abazizigidi ezingama-90 kwi-heydey yayo. Isasaziwa (iStatista ibekwe njengenombolo yesibini), kwaye usetyenziso lubanga ukuba ungamaxesha angama-2.7 kunokwenzeka ukuba ungene incoko kwiiyure zakho zokuqala ezingama-24 kunezinye ii -apps. Xa ubalo abasebenzisi bayo ababhinqileyo, i-app bafumanisa ukuba 44 ekhulwini abantu oomama-nabangatshatanga ukuba bafumane ekhulwini iqabane 10 ngokukhawuleza ngaphezu umsebenzisi avareji. Khuphela kwaye uswayipha simahla, kwaye uhlaziye ukongeza ezinye iifoto okanye ubonise kuqala kumaqabane anokubakho aqala kwi- $ 19.99.
Emva kokugcwalisa iphepha lemibuzo leapp kunye nokuhamba (cinga iinqanawa zomkhenkce ezinje: Ialgorithm ikwakhonza kunye nemidlalo yakho “ ehambelana kakhulu ” —ngobani ophindwe kasibhozo ukuba uphume nabo, batsho. I-app ayibonisi kuphela ukuba bangaphi abantu abakuthandileyo, ikwakuxelela nento abayithandayo ngawe, yenza ukuba kube lula ukuqala incoko.
I-algorithm ye-OKCupid isebenzisa uthotho lwemibuzo ukufumanisa ukuba yeyiphi na “ipesenti” oza kuyidibanisa nabasebenzisi bayo abazizigidi ezihlanu. Oko kugxilwe kukuqhutywa kukuhambelana kungumtsalane ngakumbi kwabasetyhini, abenze iipesenti ezingama-58 zabaphenduli abakhethe le app kwipoliyo yePCMag. Kukwabandakanya konke okubalaseleyo, ukubonelela ngeempawu zokuziphatha ngokwesini ezili-12 kunye nokuziqhelanisa nokwabelana ngesondo okungama-20 ukuze uzichaze ngokwakho ukuba ufuna ntoni kwaye ungqinelane nalowo ufuna.
Ekuqaleni i-app kaFacebook, iZoosk ngoku yenye yezona ndawo zinkulu zokuthandana phaya, ezinokukhutshelwa ngaphezulu kwezigidi ezingama-30 okoko yasungulwa ngo-2007. Namhlanje, inabasebenzisi abakhutheleyo abangaphezu kwesigidi, ngokweStatista- nangama-500,000 abo bangamalungu ahlawulayo, oko kuthetha ukuba ngaphezulu kwesiqingatha sabasebenzisi bazimisele kakhulu ukufumana umdlalo. Endaweni yokukunyanzela ukuba ugcwalise iphepha lemibuzo elide, amanqaku eapps algorithm onxibelelana nawo ukuze ulungiselele ngcono umdlalo onokubakho.
Okwangoku, iHarmony ligama lekhaya. Ngoyena mntu ukhuphisana naye omkhulu, kwaye ngawona maqela mabini amakhulu aneminyaka engama-30 ukuya kwengama-44 ubudala nama-55- ukuya kuma-64 eminyaka ubudala. Inkqubo yokubhalisa-equka iphepha lemibuzo elinemibuzo eli-150- luhambo, kodwa uphawu lwake lwathi lubenoxanduva lokudala i-4% yemitshato e-US Plus, amalungu abhalisele ipremiyamu anokukhetha ukuya Umhla wevidiyo ngaphambi kokuhlangana ngesiqu.
10. IKofu Idibana neBagel
Yonke imihla emini, iKofu idibana neBagel iya kuthumela kwaye ikuthumele kwimidlalo esemgangathweni- okanye "iibhegi" njengoko zibabiza njalo-zikhethwe yi-algorithm yayo. Ngaphandle kokutyibilika okubandakanyekileyo kunye nokukhetha okuncinci kwemihla ngemihla, le app yenzelwe ukuba ingoyisi. Ngapha koko, iiprofayili ezinzulu kunye nemibuzo "yomqhekezi womkhenkce" ikhuthaza incoko enentsingiselo, isenza ukuba le app ifezeke kwabo bafuna ukuqala ubudlelwane obunzulu.
Ngabasebenzisi abangaphezulu kwesigidi se-14, uHily umele "Hei, ndiyakuthanda!" Insiza isebenzisa i-AI ukuqhubeka nokuphucula umdlalo, kwaye inezinto ezinje ngamabali e-Hily ukukunceda ukuba ubambe kakuhle ukuba ungubani. Insiza isimahla, kunye nokubhaliselwa ngokuzikhethela kwamava emowudi engenazintengiso kunye nemowudi ye-incognito.
Ukuba ujonge abantu abamnyama abangatshatanga ababelana ngemidla yakho, i-BLK yinkqubo yokuthandana egxile ekufumaneni olo nxibelelwano kuluntu lwabo lwabasebenzisi. Ngaphezulu kwezigidi ezi-4 zokukhuphela, iapps yasimahla ikuvumela ukuba utshatise kwaye uncokole namaqabane anokubakho. Okanye, nyusa ubulungu beprimiyamu (i-10 yeedola ngenyanga) ukuze ufumane amava angenazintengiso, iprofayili eyonyuselweyo, inani elingenamda lokuthandwa, kunye nokukwazi "ukubuyisela umva" ngokunika umntu ithuba lesibini.
Ngaba uyamthanda lo mmelwane mhle kodwa ungalazi igama lakhe? Rhoqo ujongana nomntu ngelixa uhamba nenja yakho kodwa ungaqali incoko? I-Happn yinkqubo yokuthandana enokunceda ukwenza olo nxibelelwano lubonakala lulahlekile lube yinyani. Ngokusebenzisa indawo ekuyo kwifowuni yakho, ungadibana nabantu abakwi-app abakufutshane. Ngabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezili-100 kwihlabathi liphela, kunokwenzeka ukuba ufumane ubumelwane bakho obaphukileyo.
Yenziwe ngabafazi abangamakhosikazi, le app ye-LGBTQ + yokuthandana (kunye neqonga lezentlalo) lelabafazi nabantu abangafunanga ukufumana uthando kwindawo ekhuselekileyo. Abasebenzisi babo abazizigidi ezi-6, i-HER ibonelela ngoluntu lwangaphakathi nohlelo kunye neminyhadala yokubamba ukunceda ukukhuthaza ezo ntlantsi ukuba zibhabhe.
15. Isangqa sangaphakathi
Ukuba uzimisele ngokufumana esinye isiqingatha sakho kwaye ufuna ukunqanda ukutshintshela kwinto engenanto, Isangqa Sangaphakathi sifuna ukuba bonke abasebenzisi bamkele "Umhla weSithembiso esingcono" esineenkcukacha zokuzibophelela ekubeni "sihloniphe, sithembekile, kwaye siquka wonke umntu." Le app inika iinkangeleko ezineenkcukacha, amacebo okucoca awodwa, kunye nengxoxo-ukuze uphephe imiyalezo eyoyikekayo ye-liner "hey".
Ezona Ndawo Zokuthandana zigqibeleleyo zokwenza ukuba Lo ube ngunyaka wothando
Wonke umntu uyamazi umntu odibene naye "ngonaphakade umntu" nangona ukuthandana online kodwa nje ukuthandana ngokwayo, ukufumana indawo ekunene ungathatha ezinye kwetyala kunye impazamo. I-Kochava Collective, umphathi weyona ndawo yentengiso yedatha emikhulu ezimeleyo, waqhekeza amanani ukucebisa iisayithi ezimbalwa ngokubhekisele kwinani labasebenzisi. "Sineenkcukacha ezifumanekayo ngaphezulu kwezixhobo ezibhiliyoni ze-7.5," utshilo uJake Courtright, umphathi ophambili kaKochava. "Njengengxenye yale seti yedatha, sinolwazi lwe-'app graph 'kwezi zixhobo, noluluhlu lweapps ezifakwe kwezi zixhobo. Sijonge zonke ii -apps ezinkulu zokwenza amadinga kuGoogle Play nakwiivenkile zeapps, emva koko sachonga iiapps ezintlanu ezinofakelo olukhulu kulwazi lwethu. ”
Kodwa ngenxa yokuba ayisithi sonke esenza izigqibo ezisekwe kumanani kuphela, sikwazile ukujikeleza olu luhlu ngezinye iindlela ezimbalwa ezinokuhambelana nemeko ethile. Ezinye zezi zinto zenzelwe abantu be-LGBTQ +, abasebenzisi beminyaka ethile, abasebenzisi abaMnyama okanye i-BIPOC, abo banomdla othile ngokufanayo kunye nabanye abanokungawufumani umhla wabo ogqibeleleyo kolunye losetyenziso oludumileyo. Nokuba ujonga i-fling engaqhelekanga, isaphulelo sokufumana ukwahlukana okanye ubudlelwane bakho bexesha elide, ungaqala ngokukhuphela enye yezi zixhobo zokuthandana.
Ukuba ubukhe wakwi-intanethi kwaphela, mhlawumbi uyazi ngeTinder. Ngokuya ngokuhlangeneyo kweKochava, usetyenziso lunelona nani liphezulu labasebenzisi bazo zonke iinkqubo zokuthandana phaya. Ngelixa uninzi lwabasebenzisi lujikela kwiTinder yokuhlangana okungaqhelekanga, abanye bafumene uthando lwexesha elide apha.
Kwi-Bumble, abantu basetyhini ngabo baqala unxibelelwano. Ewe kunjalo, sesiphi isini esenza intshukumo yokuqala asiyongxaki kubafazi be-LGBTQ +, kodwa amanenekazi afuna i-dudes anokuyifumana impepho yomoya omtsha. U-Kochava uthi uninzi lwabasebenzisi bayo nabo bawela kwi-26- ukuya kwi-35 yeminyaka ubudala, ngoko ke iidaters ezincinci zinokuyithanda loo nto.
Nabani na okhe wathandana nomdlalo okomzuzwana mhlawumbi uve nge-OkCupid, esele ikho ukusukela ngo-2004.
Usetyenziso oluchazwe nguKochava, olu lwalunesiseko somsebenzisi omncinci emva kweBumble, ngaphezulu kwesiqingatha sabasebenzisi abangena phantsi kweminyaka yobudala engama-36. Kwaye, ngokunyaniseka kwigama layo, isiza sibanga ukuba sesinye seqonga elikhulu lokuthandana .
Abasebenzisi abanemigca embalwa yokuhleka kunye nemitya yesilivere banokufumana imimoya yohlobo kwi-app enabantu abaninzi kubemi babo. Idatha kaKochava ibonisa ukuba uninzi lwabasebenzisi beMeMeMe bakuluhlu lweminyaka engama-46 ukuya kuma-55 ubudala, lulandelwa ngokusondeleyo kubakaki abangama-55 ukuya kuma-65.
Ukongeza ekubeni nesiseko somsebenzisi esibanzi, uKochava uphawula loo ndlela kunabafo abaninzi kunabafazi abakhuphelayo i-Happn, usetyenziso olusekwe kwindawo. Amanenekazi afuna i-gents, ngamana amathuba okuhlala ekhona.
Eyona Dating Apps
Abahleli bethu ngokuzimeleyo baphanda, bavavanya, kwaye bacebisa ezona mveliso zibalaseleyo; ungafunda ngakumbi malunga nenkqubo yethu yokujonga apha. Sinokufumana iikhomishini ngokuthenga okwenziwe kwiikhonkco zethu ezikhethiweyo.
Ifoto nguLuis Alvarez / Getty Izithombe
Ukungena kwilizwe leenkqubo zokuthandana kunokuba nzima, ngakumbi ukuba awuqinisekanga ncam ukuba ungakhuphela ntoni. Ezinye ii -apps zenzelwe ubudlelwane bexesha elifutshane, ngelixa ezinye zikhuthaza ukwazana ngokwenene ngaphambi kokudibana kwi-cocktail okanye ikofu yeFaceTime. Nokuba ujonge ukuya ezantsi emgceni wendlela okanye ukubetha nje okuqhelekileyo, kukho inkonzo ekufaneleyo.
Apha siqokelele ezonaapps zibalaseleyo zokuthandana, ukuze udibane nomdlalo wakho-nokuba ngowobusuku okanye unaphakade.
Eyona Dating yeNkqubo ka-2021
Okugqwesileyo ngokubanzi: Ihenjisi
Eyona ilungele umtshato: Umdlalo
Eyona ilungele uKhethekileyo: URaya
Eyona ilungileyo kwiMihla yokuQala: Bumble
Eyona LGBTQ yokuSebenza ngokuDibana: HER
Eyona ilungele ukuthandana kwamaJuda : JSwipe
Eyona ilungele ukuBonana ngokuNgaqhelekanga : iTinder
Isizathu sokuba sikhethe oku: Ihenjisi ikunika inani eliqingqiweyo lonxibelelwano ngemini, iyenza ukhetho olungcono kubantu abafuna ulwalamano olunzulu.
Ukwabelana ngolwazi oluthe kratya malunga nabantu, kubandakanya ukuthanda kunye nokungathandwa
Uziva egxile ngakumbi kwiincoko ezinentsingiselo kunye nokwakha ubudlelwane
Inika kuphela inani eliqingqiweyo lemidlalo ngaphandle kokuba uhlawule ngokuphucula
Ufuna abantu bahlawule ukunika imatshisi i "rose", isenza ukuba iapp iyibhideke kancinci
Ihenjisi yaqala njengendlela yokudibanisa izihlobo zabahlobo kunye nabantu abakwi nethiwekhi yakho. Xa yayisekwe ngu-CEO u-Justin McLeod, i-app yabonisa abantu iinkangeleko esekwe kufutshane kunye nabahlobo be-Facebook ababelana ngokufanayo. Ngoku, iqhagamshela ngokulula abantu nabantu abakufutshane nendawo abayikhethileyo.
Abasebenzisi banokukhetha ukunxibelelana nomntu ngokuthepha iqhosha lengxoxo kunye nokuthelekisa okanye ukushiya uluvo kwiphepha. Iiprofayili zinika izizathu zokuba incoko iqale ngathi "Ukuba ukuthanda oku akulunganga, andifuni ukuba lilungelo…" kwaye "Inye into endithanda ukuyazi ngawe…."
Ihenjisi ikubonisa ulwazi oluthe kratya malunga nabantu, ke ukuba awonwabanga ukudibana nabantu ongabaziyo kwi-intanethi, oku kwenza kube lula. Inika amagama abantu okugqibela kwaye bahlala kubumelwane babo, ubudala, ukuphakama, umsebenzi, idolophu yasekhaya kunye nekholeji.
Le app isimahla kodwa ifuna ukuba abantu bahlawule, ebacela ukuba bahlawule i "roses" yokwenyani eyenzelwe ukufana nokuma kwinkonzo oyikhethele yona ngokusekwe kwinto oyikhangelayo. Konke kuvakalelwa ngathi sisiqendu seBachelor . Ukulungiswa kwemihla ngemihla kukhetho lwakho olufanelekileyo kukwayaziwa ukuba akunakuncedo. Amaxesha amaninzi baya kukhetha umntu okude kakhulu okanye ngokudibeneyo kwezopolitiko. Ngamanye amaxesha, banokukubonisa umntu osele umazi onokuthi ungonwabi.
Ngokungafaniyo nezinye iiapps apho kuya kufuneka bobabini bavumelane ukutshatisa ngaphambi kokuba kuthunyelwe umyalezo, abantu abakwiHinge banokukuthumelela umyalezo ukuze uvule incoko. Ngelixa isimahla, kukho ingxelo ehlawulelweyo nayo. Ubulungu obukhethiweyo bu malunga ne- $ 30 ngenyanga, i-60 yeedola kwiinyanga ezintathu, okanye i-90 yeedola kwiinyanga ezi-6 kwaye ikuvumela ukuba uthumele amakhonkco angenamda kwaye usete izihluzi ezingqongqo.
Isizathu Sokuba Sikhethe: Sikhethe uMdlalo kuba lolona khetho lufanelekileyo kubabhali beedatha abanomdla wokutshata.
Amalungu afuna kakhulu ubudlelwane okanye umtshato
Inika abasebenzisi ulwazi olubanzi malunga nemidlalo enokubakho
Inketho yasimahla inika abasebenzisi ukujonga kuqala, kungekho ndlela yokufikelela kwimidlalo okanye imiyalezo
Kuba iapp oyibhatalayo, abasebenzisi bayithatha ngokungathí sina
Ungaqala incoko ngokukhetha Izipho zomdlalo kuwe
Umdlalo yinto endala yokulinda ngenxa yesizathu. Kuba abasebenzisi kufuneka bahlawule ubulungu, oko kuthetha ukuba abantu abajoyinayo bajolise ekuzinikeleni. IMatch.com yasekwa nguGary Kremen kunye noPeng T. Ong eSan Francisco ngo-1993. Ukusukela ngoko, iye yahlala ithandwa, ngakumbi ngabantu abafuna ubudlelwane obuluqilima.
Xa ubhalisa, ufaka igama lakho, ubudala, ubude, nokuba awufuni bantwana, awutshatanga, kwaye uyatshaya. Emva koko uphendula umbuzo othi "Yintoni ekwenza wonwabe kakhulu?" Ukukhetha kwimisebenzi kubandakanya iikonsathi, ukupheka, ukubhloga, iinkqubo zokubukela ukutya kakhulu, ezemidlalo kunye nokunye. Emva koko, ukhetha into oyikhangelayo kwiqabane, kubandakanya uluhlu lweminyaka, ubude bokuphakama, inkolo, nokuba ingaba ezo zihloko "mazibe nazo" okanye hayi.
Ngokhetho lwasimahla, amalungu afumana imiyalezo engasikelwanga mda "kwii-picks zabo eziphezulu" ezitshatelwe nguMatshisi ngokuhambelana nokuhambelana. Inketho yeprimiyamu ivumela amalungu ukuthumela imiyalezo ngokungasikelwanga mda, ukuthandwa, ukukwazi ukubona wonke umntu okuthandayo nalowo ujonge iprofayile yakho, iintetho zomntu ngamnye kunye nengcali yokuthandana, kunye nokunye.
Ngelishwa, ukuba unomdla wokusebenzisa iMatch, kuya kufuneka uhlawule; Ngaphandle koko, awukwazi ukubona ukuba ngubani othumela imiyalezo kuwe okanye into abayithethayo. Ubulungu buxabisa malunga ne- $ 18 ngenyanga ngesicwangciso sonyaka, malunga ne- $ 22 ngenyanga ngenyanga ezintandathu, kunye ne- $ 30 kwiinyanga ezintathu.
Isizathu Sokuba Sikhethe: I- Raya idume ngokuba yi-app ekhethekileyo yokuthandana ehamba rhoqo ngabantu abadumileyo kunye nabaphembeleli.
Amalungu ahloniphekile kwaye anomdla
Ububodwa beapps benza ukuba ibenomdla ngakumbi kwaye ibonakale
Kunika umdla ukubona abadumileyo ukuthandana iinkangeleko
Amalungu kufuneka ahlawulele ukuthandwa kwemihla ngemihla ukuba bafikelela kumda wabo wemihla ngemihla
Isebenza kuphela kwiifowuni
URaya udume ngokuba yenye yezona ndawo zithandwayo zokuthandana, ukubetha uluhlu lwe-A kunye nabaphembeleli njengamalungu. Kungenxa yokuba isimemo kuphela, kukho inkqubo yokwenza isicelo, kwaye abantu kufuneka bahlawule ukuze babe ngamalungu, kukho isibheno esikumgangatho ophezulu kuyo kune-app eqhelekileyo.
URaya umalunga ne- $ 7 ngenyanga kwaye ungaswayipha uye kuwo wonke umhlaba. Ukuba ufikelela ukuthandwa kwemihla ngemihla, ungahlawula malunga ne-7 yeedola ngokuthandwa kwemihla ngemihla okungama-30, okanye unokuncokola ngokulula nonxibelelwano lwakho lwangoku, olucelwa yinkqubo. Nje ukuba ulilungu, unokunika abahlobo ithuba lokudlula elinokunceda ukukhawulezisa ukwamkelwa kwabo, nangona usetyenziso lunelungelo lokwala izicelo.
Amalungu abekwe kwihlabathi liphela kwaye bahlala besebenza kwicandelo loyilo. Yindlu yeSoho ngokusisiseko yokuthandana. Unakho ukuqhagamshela iakhawunti yakho ye-Instagram, ukhethe ingoma, wenze umboniso wesilayidi weefoto, kwaye unokukhangela unxibelelwano lothando okanye abahlobo. Unokukhangela ngendawo ukuze ubone ukuba ngubani okufuphi kule app. URaya uya kukubonisa ukuba zeziphi izihlobo enifana ngazo ukuba nobabini ninenombolo yefowuni yomhlobo omnye, ke unokuhlala ubuza pal yakho ukuba bayavuma ukuba ungangomhla wakho. Unokukhangela kwakhona amalungu kwisixeko esithile okanye kwishishini elithile, okwenza kube lula ngakumbi ukunxibelelana okanye ukudibana nabantu.
Isizathu sokuba siyikhethe: IBumble inengcinga eyahlukileyo: Abafazi baqala bathumele umyalezo kumadoda emva koko banikwe iiyure ezingama-24 ukuba baphendule, beyenza ukuba ibe sisicelo esiqhutywa ngabafazi.
Kulula ukunxibelelana nabantu abaninzi ngaxeshanye
Umyalezo wabafazi kuqala ukuze bakwazi ukukhetha isihloko
Indawo-esekwe ukuze ubone ukuba ngubani okufuphi kuwe ukuba useholideyini okanye kwidolophu entsha
Amadoda angaphendula ngokulula ngeendlela ezingathandekiyo kwaye kukho ukuxhatshazwa okungaphezulu
Amadoda amaninzi awadwelisi ulwazi oluninzi malunga nabo
Unalo ixesha eliqingqiweyo lokuvula i-opener, ke kuya kufuneka ujonge iapp rhoqo
Xa iBumble yaqalwa ngumsunguli wabasetyhini uWhitney Wolfe ngo-2014, yayisekwe kwimbono yokuba abantu basetyhini baya kuthumela umyalezo kuqala, okuthetha ukuba banokukhetha ukuqala kwencoko nokulawula ibali. UWolfe uqhubeke wenza uluhlu lweForbes 30 Ngaphantsi kweminyaka engama-30 kunye noLuhlu lweXesha eli-100 waba ngowona mfazi mncinci ukuthatha inkampani esidlangalaleni eneminyaka engama-31 kuphela.
Sebenzisa iBumble kulula. Yenza iprofayili ngemifanekiso yakho kunye nolwazi malunga nawe, emva koko unokuba nesicwangciso sasimahla okanye uhlawule ezinye iindlela. Isicwangciso "sokujonga" sithembisa ukuya kumatyeli ali-10 kwimatshisi kwaye sikubeka ngaphambili emgceni kangangemizuzu engama-30 ukuze umdlalo wakho ubonane kuqala. Ungahlawula malunga ne-1 yeedola kumabala angaphandle angama-30, okanye malunga ne-6 yeedola ngokukhanya okukodwa. Okanye unokufumana ama-spotlights angama-30 malunga ne- $ 50.
Olunye ukhetho yiSuperSwipe, ethi uza kufumana “iincoko ezili-10x ezingaphezulu.” I-SuperSwipes zikuvumela ukuba uthandeke ngokungathi ngumntu, ke xa beqala ukuswayipha, uya kuba ngomnye wabantu bokuqala ababonayo. Imalunga ne- $ 1 ye-30 SuperSwipes kunye ne- $ 3 nganye kwii-SuperSwipes ezimbini. Ukuba uziva ungafuni ukuhlawulela ezi ndlela zimbini, unokuhlaziya iakhawunti yakho ukuya kwipremiyamu ukuvula zonke izinto ngaxeshanye. Ukuphuculwa kwabasebenzisi bePrimiyamu malunga ne- $ 18 kwaye bafumane ukuthanda okungasikelwanga mda, iifilitha eziphambili, imowudi yokuhamba ukubona ukuba ngubani otshintshayo kwiindawo ezithile, kunye nokubuyela umva okungenasiphelo xa uswayipha ngendlela engalunganga komnye umntu, phakathi kwezinye izinto.
Bumble lukhetho olukhulu kumntu oqala ukufuna ukubona bonke abantu abafanelekileyo ngeenxa zonke. Kuya kufuneka uswayipha ngasekunene ukuze utshatise nabantu, kwaye ke uneeyure ezingama-24 ukwenza intshukumo yokuqala kwaye uqalise incoko, ke kuya kufuneka ujonge usetyenziso rhoqo, kungenjalo imidlalo iya kuphelelwa. Amadoda ke aneeyure ezingama-24 zokuphendula. Ungakhangela usetyenziso kunye neefilitha, ukhethe ukuba unomdla kubani (amadoda, abafazi, okanye wonke umntu), uluhlu lweminyaka, kunye nomgama. Unokuseta kwakhona amacebo okucoca phambili, ujonge ukuphakama okuthile, uphawu lweenkwenkwezi, imvelaphi yemfundo, kunye nokunye.
Eyona ilungele ukuthandana kwe-LGBTQ: YAKHE
Isizathu Sokuba Sikhethe: Sikhethe yena kuba yeyona nto inkulu ehlabathini ukuthandana simahla kubafazi be-LGBTQ.
YAKHE yeyona inkulu simahla ukuthandana usetyenziso lwabasetyhini abathandanayo nabasetyhini
Le app yabelana ngeendaba ze-LGBTQ + kunye neziganeko zalapha ekhaya ezenzeka, zibonelela ngeendawo ezikhuselekileyo
Abantu bakhalaza ukuba ezinye izibini zikhangela ama-threesomes kwi-app
Ukuba awuhlawuli, kuya kufuneka ulinde iiyure ukuze uswipe ngakumbi
YAKHE yeyona inkulu simahla ukuthandana app yabasetyhini abamnyama, enika amandla okutshatisa, kunye nokubonelela ngeendaba malunga nokuhlangana kwendawo kwiindawo ezikhuselekileyo. Uhlelo lokusebenza lusebenza njengoluntu kwaye luzama ukwamkela kunye nenkxaso.
Ngokufana neTinder, YAKHE imalunga nokuswayipha. Ukuswayipha ngasekhohlo kuthetha ukuba awunamdla emntwini, ngelixa iswayipha ekunene (okanye intliziyo ye-emoji) kuthetha ukuba ungathanda ukwazi umntu lowo. Emva koko, loo mntu unokuthatha isigqibo sokuba iimvakalelo ziyafana kwaye akuthumele umyalezo.
Ngelixa isimahla, kukho iintlobo ezintathu zobulungu bobulungu beprimiyamu. Iprimiyamu, ubulungu benyanga enye buqala malunga ne- $ 15, kwiinyanga ezintandathu zijikeleze i- $ 60 kwaye kunyaka omnye phantse ibe zii-90 zeedola.
Eyona ilungele ukuthandana kwamaJuda: JSwipe
Isizathu Sokuba Sikhethe: IJSwipe lukhetho olukhulu kubantu abangamaJuda ukuswayipha kwaye badibane, nokuba bahlala phi.
Ukwazi ukudibana neengoma zamaJuda ngokulula
Ubume beApple benza ukuba kube nzima ukubona ukuba abantu bahlala phi okanye baswayipha
IJSwipe lukhetho olukhulu ukuba ungumYuda okanye ufuna ukuthandana namadoda angamaJuda okanye abafazi. Yaziswa ngonyaka ka-2014 ngePasika ngumsunguli uDavid Yarus, owayesebenzela u-Birthright Israel no-Hillel ngelo xesha, i-app ese-Brooklyn yafunyanwa kamva ngugxa wayo, i-JDate.
KwiJSwipe, ungena kwi-bio emfutshane, imfundo yakho kunye nobudala bakho. Uyacelwa ukuba ugcwalise nokuba ugcina i-kosher kunye nehlelo lakho. Emva koko, ungaqala ukuswayipha. Iphepha lakho leprofayile linxibelelana nephepha lakho le-Facebook, ke liyakubonisa ukuba zeziphi izinto onomdla kuzo kunye nemidlalo esekwe kwinto owawuyithanda ngaphambili kuFacebook.
I-JSwipe ibonelela ngohlobo lwasimahla, kunye nobulungu beklasi yokuqala, apho ungaya khona kwiminyhadala ekhethekileyo kwaye ufumane izinto ezifana neziselo zasimahla kunye nentengiso. Inguqulelo ekhethekileyo ikwavumela ukuba ubone ukuba ngubani othanda iprofayili yakho, yonyusa iprofayili yakho kwimidlalo engaphezulu, swayipha
Ubulungu benyanga enye bumalunga ne- $ 25, iinyanga ezintathu zibiza malunga ne- $ 45, kwaye ubulungu beenyanga ezintandathu bu- $ 60. Okufana neTinder, ikubonisa ukuba ngubani ojikelezayo ujikeleze indawo, kodwa unokuseta irediyasi enkulu ngakumbi kwaye ubone ii-singles kwihlabathi liphela.
Eyona ilungele ukuBonana ngokuNgaqhelekanga: iTinder
Isizathu Sokuba Sikhethe: Awunakho ukungayikhathaleli i-app yoqobo yokuthandana, iTinder, eyakhokelela ekuswayipheni. Kukulungele ukudibana okanye ukuthandana ixesha elide.
Ukufezekisa ukutshonisa iinzwane zakho kwihlabathi lokuthandana kwi-Intanethi
Kulula ukuhamba, ngakumbi kwabaqalayo benkqubo yokuthandana
Olunye lolona khetho luqhelekileyo lujolise ngakumbi kwi-hook-ups
Ugxininisa ukhetho olungenasiphelo odibana nalo ngelixa uswayipha
I-Tinder ngokwenene yinkqubo eqalile konke. Yaphehlelelwa ngo-2012 kwaye yatshintsha ngokwenyani imeko yokuthandana ngonaphakade, ukwazisa ii-singles kwihlabathi lokuswayipha ngasekhohlo okanye ekunene ukutshatisa nabantu abanokulala nabo okanye abanye ababalulekileyo.
Kwaye ngelixa bekukho abantu abaninzi abafuna zonke izinto ezahlukeneyo, ngoku ijolise ngakumbi kukuthandana ngokungaqhelekanga. I-Tinder yeyona ilungileyo kwidolophu encinci apho kungekho bantu baninzi kwii -apps ze-niche kodwa ngokuqinisekileyo uyazi ukuba abantu bafuna amanye amalungiselelo angacwangciswanga.
Ngelixa iqale njengeapp yasimahla, ngoku kukho inketho yasimahla kunye nehlawulelweyo evumela abasebenzisi ukuba "bathande kakhulu" abantu (uhlobo olongezelelekileyo lokuthopha ekuthiwa luphindwe kathathu amathuba akho omdlalo), sebenzisa incwadana yokundwendwela ukubona ukuba ngubani ophumileyo phaya kwezinye iindawo, kwaye ubone ukuba ngubani othande wena ngaphambi kokuba uswipe ngqo kubo. I-Tinder Gold inika abasebenzisi konke oko kunye nokunye malunga ne- $ 15 ngenyanga, ngelixa i-Tinder Platinum inika abasebenzisi ezo zikhetho kunye nokukwazi ukuthumela umntu umyalezo ngaphambi kokuthelekisa malunga ne- $ 10 ngenyanga iinyanga ezintandathu.
Ukukhuphela usetyenziso lokuthandana kunokubonakala ngathi kukuzibophelela okukhulu kwaye uzive uxakekile ukuba awuqinisekanga ukuba yeyiphi oza kuqala ngayo, kuba bonke banee vibes ezahlukeneyo. Ihenjisi lolona khetho lufanelekileyo ukuba ujonge ukufumana into enzulu ngakumbi malunga nokuthandana kweapp. Ukunika ulwazi oluthe kratya malunga nemihla enokubakho kwaye ikhuthaze iincoko ezinentsingiselo ngakumbi. I-Raya ilungile ukuba unethemba lokubona indumasi okanye ufuna ukunxibelelana nezinye izinto ezinje, kodwa kunokuba nzima ukufumana isimemo kuyo.
IBumble ilungile ukuba unethemba lokuya kwimihla emininzi yokuqala. Uhlelo lokusebenza alukuxeleli okuninzi ngabantu, kodwa lwenza kube lula ukuswayipha ngokungapheliyo kwaye uqalise ukuncokola. Cinga ngakumbi ngokungathi udibana nomntu kwi-bar ngokungakhathali. Ukuba ujonge ukuthandana nabafazi kwaye ufuna usetyenziso ngokukodwa oko, YAKHO ukubheja kwakho okuhle. Kwaye ukuba ufuna ukuyigcina ngokungaqhelekanga, iTinder yeyona indala ethembekileyo ngesizathu.
Usebenza Njani Ukuthandana IiNkqubo?
Ezinye iiapps zifuna omabini amaqela aswayipe ekunene ukuba anomdla kwaye akuvumele ukuba uqhagamshele. Abanye bavumela umntu omnye ukuba athumele umyalezo, kwaye emva koko umamkeli unokuthatha isigqibo sokuba ufuna ukuphendula okanye hayi. Ezimbalwa zeapps zinika ulwazi olubanzi, kubandakanya ikholeji, ukuphakama, nokuba abantu bafuna abantwana okanye hayi, ngelixa abanye beza kukubonisa amaqabane akhoyo kufutshane ngaphandle kolwazi oluninzi.
Ngaba kukho uKhetho lwaSimahla kunye nokuHlawulwayo kwiiNkqubo zokuDibana?
Uninzi lwee -apps zokuthandana zikhululekile, okanye ubuncinci zinokukhetha simahla kunye nepremiyamu, ukhetho oluhlawulelweyo. Inketho yasimahla ihlala inika abantu ithuba lokuswayipha, ngelixa ukuhlawula kuvumela abantu ukuba babaluleke ngakumbi, ukuseta amacebo okucoca abonisa kuphela ukuphakama okuthile, inkolo, okanye ukudibana kwezopolitiko, umzekelo. Uninzi lwezinto zokusebenza, kulula kakhulu ukuzikhuphela kwaye usebenzise ingxelo yasimahla ngaphandle kokuba ujonge into ekhethekileyo. Ezinye iiapps, ezinje ngeRaya, zifuna ukuba bonke abasebenzisi bahlawule imali encinci yenyanga. Ngokwesiqhelo, umrhumo uba mncinci ukuba uhlawula iinyanga ezimbalwa okanye ngaphezulu.
Zingakanani iiNkqubo zokuDibana neeNkqubo?
Ukuthandana kweesoftware kuyahluka ukusuka simahla ukuya kuthi ga kwi-100 yeedola ukuba ufumana ipremiyamu kunye notyalo mali kwiinyanga ezimbalwa zayo. Olona khetho lubiza kakhulu luya kukunika uluhlu lweeprimiyamu eziphucula iprofayile yakho, nokuba zikubeka kwindawo ebonakalayo kwimidlalo enokubakho okanye zikunike ithuba lokuthumela umyalezo kumntu ngaphandle kokuthelekisa kuqala.
Sibuze iingcali malunga neeapps, sifunde uphononongo, kwaye savavanya eyethu iminyaka yamava sizisebenzisa. Sikwajongile iiapps ezinikezela ngolwazi olubanzi malunga nabanye, kunye nokuguquguquka xa kuziwa kwizicwangciso zokuhlawula. Kwakubalulekile kuthi ukuba sibonise iindlela ezahlukeneyo zokukhetha ukuthandana, nokuba zi-hookups ezingaqhelekanga, imihla yokuqala, okanye umtshato. Ukubandakanywa kwakuyinto ebalulekileyo ekumiseleni ukhetho lwethu, ke ii -apps ezilungiselela iindlela ezahlukeneyo zesini kunye neenkolo zenza uluhlu.